ညီမလေးရယ် ကောင်းလိုက်တာ - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
ညဖက်ဆို ကျနော့်စိတ်က ဖောက်ဖောက်လာတယ်။ တနေကုန် အလုပ်ပင်ပန်းပေမယ့် ညဆို ရာဂစိတ်က ထကြွသောင်းကျန်းတတ်တယ်။ အိမ်မှာက ကျနော်ရယ် ဝေဝေရယ် နှစ်ယောက်ပဲ ရှိတာ။ မိဘတွေ ဆုံးသွားပြီးကတည်းက ဝေဝေ့ကို အကိုလိုရော မိဘ လိုရော စောင့်ရှောက်လာခဲ့ရတာ။
ဒီကောင်မလေးကလည်း ခုမှ တက္ကသိုလ် ပထမနှစ် ဆိုတော့ သူ့ပညာရေးကို ငှဲ့ပြီး ကျနော် အိမ်ထောင်ပြုချင်ပေမယ့် မပြုရသေးဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ခုဆို ကျနော့်အသက် ၂၄ ပြည့်တော့မယ်။ သန်သန်မာမာ ယောကျ်ားတစ်ယောက်အနေနဲ့ လိင်စိတ်ထန်တာ သိပ်မထူးဆန်းပါဘူးး။ ဒီလိုနဲ့ ခွေးဇာတ်ခင်းမိတဲ့ညက ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာတော့တယ်။
အဲ့ညက ကျနော် အလုပ်ဆင်း အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မီးက ပျက်နေတယ်။ ဖယောင်တိုင်မီးနဲ့ စာကျက်နေတဲ့ ဝေဝေ့ မျက်နှာလေးဟာ မှိန်ဖျော့ဖျော့ မီးရောင်အောက်မှာ အပြစ်ကင်းစင်နေလေတယ်။ ကျနော် ဝေဝေ့ အနားမှာ ထိုင်လိုက်တော့ သူ့ရဲ့ လည်ဟိုက်နေတဲ့ အင်္ကျီအောက်က ပြည့်ဖောင်းနေတဲ့ ရင်သားလေးက ကျနော့် အသိတွေကို ရောင့်ယက်ခက်သွားစေတယ်။ ကျနော် သတိမထားမိခင်မှာပဲ ဝေဝေ့ကို ဖက်ထားလိုက်မိတယ်။
“ဟာ… ကိုကြီး ဘာအရူးထတာလဲ”
ဝေဝေကတော့ ခုထိ ကျနော့်ကို စနောက်နေတယ်ပဲ ထင်နေတုန်။
ကျနော် ဘာစကားမှ မပြောမိတော့ပါဘူး။ ဝေဝေ့ကို ဖက်ထားရာကနေ သူ့ကို ဖျာပေါ်ကို ဆွဲလှဲပစ်လိုက်တော့ သူ့ထမိန်လေး ကျွတ်သွားတယ်။
“ဟာ ကိုကြီး လွှတ်ပါ ဘာလုပ်တာလဲ”
ဝေဝေ့ စကားသံတွေ တုန်ရီလာတာ သတိထားမိတယ်။ ကျနော်မှာ မောင်နှမဆိုတဲ့ အသိ မရှိတော့ပါဘူး။ စွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ ဝေဝေ့ နှုတ်ခမ်းအစုံကို နမ်းလိုက်ပြီး ဝေဝေ့ ရင်သားသေးသေးလေးတွေကို ဖိညစ်ဆုပ်ကိုင် မိတော့တယ်။
“အာ့ . . ကိုကြီးးရယ် မလုပ်ပါနဲ့”
ဝေဝေ့ မျက်နှာပေါ်မှာ မျက်ရည်တွေ စီးကျလာတယ်။ ကျနော့် ညာဘက်လက်က ဝေဝေ့ အဖုတ်ကြားလေးကို စပြီး ပွတ်ချေလိုက်တော့ ဝေဝေ့ဆီက ညည်းသံသဲ့သဲ့လေး ကြားမိလိုက်တယ်။ ကျနော့်စိတ်တွေ ပိုရောင့်ယက်ခက်သွားတယ်။
ကျနော့် ပုဆိုးကိုချွတ် ဝေဝေ့ ထမိန်ကိုလည်း ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး ဝေးရာကို လွှတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ခုဆို ဝေဝေ တစ်ယောက်ကတော့ အခြေအနေအမှန်ကို သိလို့ တရှုံ့ရှုံ့ ငိုနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဝေဝေ့ဆီက ဘာစကားသံမှ မကြားရပါဘူး။
ဒါနဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ထောင်မတ်နေတဲ့ လီးညိုညိုကြီးကို တံတွေးစွတ်ပြီးတော့ ဝေဝေ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးအဝမှာ တေ့လိုက်တော့ ဖယောင်တိုင်မီးရောင်ဟပ်နေတဲ့ ဝေဝေ့မျက်နှာလေးက ပိုဆွဲဆောင်မှု ရှိနေတယ်။ ကျနော် ဒစ်လန်နေတဲ့ လီးကြီးကို ဝေဝေ့ အဖုတ်လေးထဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းစီ ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ ဝေဝေ့ဆီက “အင့်” ဆိုတဲ့ အသံလေးကိုကြားလိုက်တယ်။ သူ့မျက်နှာလေးကတော့ အံကိုကြိတ်လျက်ပဲ။
ကျနော် ဘီလူးစီးနေသလိုပဲ ဘာအသိစိတ်မှ မရှိတော့ဘူး။ လီးကို ထပ်ထိုးသွင်းပြီး ဆောင့်ချလိုက်တယ်။ ဝေဝေ့ အပျိုမှေးလေး ပေါက်သွားတယ်။
“အာ့ … နာတယ် ကိုကြီးရယ်… ညီမလေးကို သနားပါ ကိုကြီးရယ်”
ဝေဝေ့အသံ တိုးတိုးလေး ထွက်လာတယ်။
ကျနော့် ဘဝမှာ တစ်ခါမှ မခံစားဖူးသေးတဲ့ အရသာထူးကို ခံစားနေရပြီး တင်းကြပ်နေတဲ့ ဝေဝေ့ စောက်ခေါင်းလေးကို တဖြည်းဖြည်းချင်း လိုးတာ အားမရတော့လို့ ဝေဝေ့ ချိုင်းနှစ်ဖက်အောက်ကနေ လက်လျှိုသွင်းပြီး သူ့ပုခုံးနှစ်ဖက်ကိုကိုင် ကျနော် အသားကုန် ဆောင့်လိုးတော့တာပဲ။
“ပြွတ် ပြွတ် ဖုတ်ဖုတ် ပလပ် . . . .”
ကျနော့်လီးမှာ ဝေဝေ့ စောက်ခေါင်းထဲက ထွက်လာတဲ့ သွေးတွေရော အရည်ကျဲကျဲလေးတွေရော ပေကျံသွားတယ်။
“ကောင်းလိုက်တာ ညီမလေးရယ်. . . . .”
အပျိုရည် ဖျက်ခံနေရတဲ့ ဝေဝေကတော့ သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကျနော့် လည်ပင်းကို တင်းတင်းဖက်ပြီး လူးလှိမ့်ခံနေရတာပေါ့။
“အား ကိုကြီးရယ် ရက်စက်ပါ့”
ဝေဝေ့ ညည်းသံလေးတွေက ကျနော့်စိတ်ကို ပိုထန်စေခဲ့တယ်။ မရပ်မနား ဆောင့်လိုးတော့ ဝေဝေ့ ပေါင်ဖြူဖြူလေး နှစ်ဖက်ဟာ တဖြည်းဖြည်း ကား လာတယ်။ ဖောင်းပြည့်နေတဲ့ ဝေဝေ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖိကိုက်လိုက်တယ်။ ကစ်ဆင်ဆွဲပစ်ပြီး ဆယ်မိနစ်လောက် ဝေဝေ့ကို လိုးလိုက်တာ သိပ်မကြာပါဘူး ဝေဝေ့ ညည်းသံတွေ မြိုင်လာတယ်။
“ညီမလေးး မရတော့ဘူး ကိုကြီးရယ်”
ဝေဝေ ပြီးတော့မယ်ဆိုတာ ကျနော် သိလိုက်ပြီ။ တင်းကြပ်နေတဲ့ ဝေဝေ့ အဖုတ်လေးဟာ တဖြည်းဖြည်း အရည်တွေ ရွှဲနစ်လာတယ်။ ဒါနဲ့ကျနော်လည်း ပါးစပ်က “ဝေဝေ ဝေဝေ” လို့ အော်ညည်းရင်း အားနဲ့ လီးကို ဆောင့်ချလိုက်ပြီး ကျနော့် သုတ်ရည်ဖြူဖြူတွေကို ဝေဝေ့ စောက်ခေါင်းလေးထဲ ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။
ဝေဝေ့ကို တစ်ချီ လိုးပြီးသွားတော့ ကျနော့် တကိုယ်လုံးလဲ အားတွေ ကုန်သွားသလိုပဲ။ ဘေးနားက ဝေဝေကတော့ တရှုံ့ရှုံ့နဲ့ ငိုနေတယ်။ ထမီလေးကို ပြန်ကောက်ဝတ် ကုက်ကုက်လေးထိုင်နေတဲ့ သူ့ပုံစံလေးက ကဗျာဆန်နေတယ်။ ကျစ်ဆံမီးလေး နှစ်ဖက်နဲ့ မျက်ရည်တွေ စိုနေတဲ့ ပါးပြင်လေးနှစ်ဖက်ဟာလည်း လိုက်ဖက်ညီလှတယ်။
ပထမနှစ် ကျောင်းသူလေး တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရည်းစားတောင် မထားဖူးသေးပဲ အစ်ကို ဖြစ်သူရဲ့ အညွှန့်ချိုးခြင်းကို ခံလိုက်ရတာလေ။ ဒီလိုကြပြန်တော့လည်း ညီမလေးကို သနားမိသား။
“ညီမလေး ကိုကြီးကို ခွင့်လွှတ်ပါနော်… ကိုကြီး စိတ် မထိန်းနိုင်လို့ ဖြစ်သွားးတာပါ . . ညီမလေး မငိုပါနဲ့တော့ဟာ နော်. .”
“ဟာ ညီမလေးရယ် မငိုပါနဲ့တော့ဆို လူကြားလို့လည်း မသင့်ဘူးဟ”
ကျနော်က ဝေဝေ့ကို ဘယ်လောက်ချော့နေနေ ဒီကောင်မလေးကတော့ တအီအီနဲ့ ငိုနေတုန်း ကြာတော့ စိတ်က မရှည်ချင်တော့ဘူး။
“နင့်ကိုငါ ဘယ်လိုပြောရမလဲ တိတ်တော့ဆိုတာ နားမလည်ဘူးလား… ငါ နင့်အစ်ကိုနော် စကားလေးဘာလေး နားထောင်ဦး”
ဝေဝေ့ ငိုသံကတော့ ပိုကျယ်လာပါတယ်။ ကျနော်လည်း ဒေါသက ဖြစ်လာတော့ သူ့ပါးစပ်ကို လက်နဲ့ပိတ်ပြီး ဖျာပေါ်ကို ဆွဲလှဲချလိုက်တယ်။ ရင်လျားထားတဲ့ ဝေဝေ့ ထမိန်နွမ်းနွမ်းလေဟာ ကျွတ်ပြီး လျှောကျသွားတယ်။ ပူပူနွေနွေး အလိုးခံထားရတဲ့ သူ့အဖုတ် ဖောင်းဖောင်းလေးက ရောင်ကိုင်းနီရဲနေတယ်။ ရင်သားလေး နှစ်မွာကလည်း ဆူဆူဖြိုးဖြိုးလေးဆိုတော့ ကျနော့် စိတ်တွေကို ရာဂအမှောင်က ဖုံးလွှမ်းသွားတော့တယ်။
ကျနော့် လက်နှစ်ဖက်က အလိုလို ဝေဝေ့ရဲ့ နို့လေးနှစ်လုံးကို ဖြစ်ညှစ်ဆုပ်ကိုင်မိတော့တယ်။ ဝေဝေကတော့ မျက်ရည်တွေ စို့နစ်နေတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကျနော့်ကို ငေးကြည့်နေရုံမှတပါး ဘာစကားသံမှ ထွက်မလာဘူး။ အိစက်ညက်ညောနေတဲ့ သူ့ရင်သားလေးတွေဟာ ကျနော့် လက်ကြမ်းကြမ်းတွေအောက်မှာ တလှုပ်လှုပ် ဖြစ်နေတယ်။ နာလို့လားမသိ ဝေဝေ့ဆီက ညည်းသံလေးတွေ ထွက်လာတယ် ။
“အားးးး အင်းး ဟင့်”
အဲ့ဒီ အသံချိုချိုလေးတွေကြောင့် ၆ လက်မလောက်ရှည်တဲ့ ကျနော့် လီးကြီးဟာ ထောင်မတ်လာပြန်တယ်။ ပြဲလန်နေတဲ့ ဒစ်ညိုညိုကြီးက ပြောင်တင်းလို့ပေါ့။ မရတော့ပါဘူးး ကျနော် နောက်တခေါက် လိုးချင်စိတ်ကို ထိန်းမရတော့ဘူး။
ဝေဝေ့ ခန္ဓာကိုယ် သေးသေးလေးကို ပက်လက်ကနေ မှောက်ခုံ အနေအထား ဖြစ်သွားအောင် ဆွဲမှောက်လိုက်တယ်။ ခုဆို ညီမလေးကတော့ ကျနော် ပြုသမျှ နုနေရတော့တာပဲ။ မလိုက်လျောလို့လည်း မရဘူးလေ။ ကျနော်က ခုထိသူ့ကို ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက်ပြီး ကျောင်းလည်းထားပေးထားရတာ။ ကိုယ့်ညီမကို ကိုယ်မှ မလုပ်ရင် သူများလုပ်သွားမှာပေါ့။
ခုဆို ကျစ်ဆံမီးကျစ်လေးနှစ်ခုဟာ ညီမလေးရဲ့ ကျောပြင်ပေါ်မှာ ရောက်လို့ပေါ့။ ဖင်လုံးဖြူဖြူလေး နှစ်လုံးကလည်း ကျစ်ပြီးချောမွတ်နေလေတယ်။ ကျနော် လီးတံ ကြီးဟာလည်း အကြောအပြိုင်းပြိုင်းထပြီး တဆက်ဆက် တုန်နေပြီ။ အရင်ဦးဆုံး ကျနော် ဒူးထောက်နေရာယူလိုက်ပြီး ကျနော့်ရှေ့က ဝေဝေ့ကို ဖင်ကုန်တဲ့ အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင် သူ့ခါးလေးကို ဆွဲမလိုက်တော့ သူ့အဖုတ်လေးနဲ့ ကျနော့်လီးဟာ တန်းတူ ဖြစ်သွားတယ်။ ခွေးလို လိုးဖို့ အသင့်ပေါ့။
ဝေဝေ့ သေးသေးကွေးကွေး ကိုယ်လုံးလေးဟာ ဖယောင်တိုင် မီးရောင်အောက်မှာ လှချင်တိုင်း လှနေတယ်။ ကျနော် လီးကို သူ့အဖုတ်ဝလေးအား တေ့ပြီး အားနဲ့ ဆောင့်ချလိုက်တော့ အဖုတ်လေးထဲက လေတွေ ထွက်သွားတယ်။
“အာ့. . နာတယ် ကိုကြီးရယ် တော်ပါတော့ရှင့်… ဝေ့ကို သနားပါနော် အားးးး”
ဝေဝေက အဲ့လို ပြောလေလေ ကျနော့် စိတ်က ထန်လေလေ။ အဖုတ်သေးသေးလေးထဲမှာ လီးက ကြပ်ညပ်နေတယ်။ တချက်တချက် လီးကြီးဟာ ညီမလေးရဲ့ သားအိမ်နံရံကို တဒုတ်ဒုတ်နဲ့ သွားဆောင့်တယ်။
“အင့်. . .ဟာ”
“ပြွတ် ပြွတ် ဘွတ် ဘွတ် . . .”
ဝေဝေ မျက်ရည်တွေ ကျလာတယ်။ သူ့ စောက်ခေါင်းလေးထဲက အရည်ကြည်တွေဟာ လိုးလိုက်တိုင်း စိမ့်စိမ့် ထွက်လာတယ်။
“ကောင်းလိုက်တာ ညီမလေးရယ်…. လိုးလို့ ကောင်းလိုက်တာဟာ… နင့် စောက်ပတ်လေးက လိုးလို့ ကောင်းလိုက်တာဟာ . .”
အချက်နှစ်ဆယ်လောက် ဆက်တိုက် ဆောင့်လိုးလိုက်တာ ခုဆို ဝေဝေကော ကျနော်ရော ချွေးတွေ ရွှဲနစ်နေပြီ။ ဝေဝေကတော့ နာပေမယ့်လည်း ကျနော့် လီးဒဏ်ကို ကြိတ်မှိတ်ခံနေရှာတယ်။ သိပ် လိမ္မာတာပဲ။ ကျနော်ကတော့ ဘီလူးစီးနေသလိုပဲ။
သူ့ခါးလေးကို လက်နဲ့ ဖိချလိုက်တော့ သူ့ဖင်လေး ပို ကော့တက်လာတယ်။ ကျနော်က သူ့ကျစ်ဆံမီးကျစ်လေးနှစ်ဖက်ကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆောင့်ဆွဲလိုက်တယ်။ “အာ့” ဆိုတဲ့ အသံလေး ဝေဝေ့ဆီက ကြားမိတယ်။ သူ့ ခေါင်းလေးကလည်း အလိုက်သင့် အပေါ်ကို မော့သွားတယ်။ ညီမလေးရဲ့ အဖုတ်ထဲက လီးကို မချွတ်ပဲ သူ့ဆံပင်ကို ဆောင့်ဆွဲ အားယူပြီး ဆယ်မိနစ်လောက် ဆက်တိုက် ခွေးလို လိုးပစ်လိုက်တယ်။ ဝေဝေ့ ကတော့ လူးလှိမ့် ခံနေရရှာတယ်။ တခါတခါ ညည်းသံလေး ထွက်လာတယ်။
“အားးးးးး ကိုကြီးရယ် ဝေ့ကို သနားပါ အားးး ဟီးးးး အားးးးး ရှီးးးးး နာတယ် နာတယ်”
“မသနားနိုင်ဘူး ညီမလေးရယ်… ကောင်းလိုက်တာဟာ. . နင့်ကိုငါ လိုးချင်နေတာ ကြာပြီဟ… နာလည်း အောင့်ခံ”
“အင့် ရှီးးးးးး ဟားးးး ညီမလေးရယ်”
“အင့် ဟာ . . . အင့် ဟာ . . .”
“မယားလေးရယ် နင့်ကို လိုးးရတာ ဇိမ်ရှိလိုက်တာ”
“ပြွတ်ပြွတ် ပလပ်ပလပ် ဒုတ် ဒုတ် . . .”
မီးကုန်ယမ်းကုန်းး ညီမလေး ဝေဝေ့ကို လိုးလိုက်တာ မကြာပါဘူး နှစ်ယောက်လုံး ကာမ အထွတ်အထိပ်ကို ပြိုင်တူ ရောက်သွားတော့တယ်။ ကျနော့် သုတ်ရည်ဖြူဖြူတွေဟာ ညီမလေး အဖုတ်က သွေးနီနီရဲရဲတွေနဲ့ ရောယှက်သွားတော့တယ်။ ကိုယ့်ညီမ အပျိုစစ်စစ်လေးကို ကိုယ်တိုင် ခွေးလိုးလိုးပြီး ပါကင်ဖောက်လိုက်ရတဲ့ အရသာ ကောင်းကောင်းကို ဒီတသက် မမေ့တော့ဘူး။
ညည့်အမှောင်ကို တိတ်ဆိတ်မှုက စိုးမိုးမင်းမူနေတယ်။ လုံခြင်းအိမ်လေး တစ်လုံးထဲက မောင်နှမနှစ်ယောက်ကြားမှာတော့ စကားသံတွေ ခမ်းခြောက်လျက်ပေါ့။ ဖယောင်တိုင် မီးလေးကတော့ လင်းပ နေတယ်။ အဲ့ဒီညက ညီမလေးနဲ့ကျနော် ညစာတောင် မစားပဲ အိပ်ယာဝင်ခဲ့ကြတယ်။ ကျနော် ခွေးဇာတ်ခင်းမိတာ မှားသွားမှန်း သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မသိစိတ်ထဲတော့ နည်းနည်း ကျေနပ်နေသလိုလိုတော့ ဖြစ်မိသား။
အိမ်က ပျဥ်ထောင်လုံးခြင်းသေးသေးလေး ဆိုတော့ အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ ကျနော်က ဖျာတစ်ချပ်နဲ့ အိပ်တယ်။ ဝေဝေကတော့ အတွင်းခန်းထဲမှာ ဖျာခင်းပြီး အိပ်တယ်။ ကုတင်မှ မဝယ်နိုင်သေးတာ။ မိဘနှစ်ပါးလုံး ဆုံးပါးသွားပြီးတဲ့နောက် ကျနော်ကပဲ အိမ်ကိစ္စအဝဝကို တာဝန်ယူထားရတဲ့အပြင် ဝေဝေ့ရဲ့ ပညာသင်စရိတ် အဝတ်အစား အလှအပက အစ ကျနော်က ဒိုင်ခံရှာဖွေပေးနေရတာလေ။ ထားပါလေ။ သန်းခေါင်ချိန်ရောက်နေပြီ အိပ်မှပါဆိုပြီး ကျနော့် မျက်လုံးအစုံကို ဖိပိတ်လိုက်တယ်။
“ဟင့်. . . ဟင့် .. ဟီးးး”
ဝေဝေ့အခန်းထဲက ရှိုက်သံလေးတွေ ပျံ့လွင့်လာတယ်။ ခက်တော့ နေပါပြီ။ ဒီကောင်မလေး အခုထိ ငိုနေတုန်း ထင်ပါရဲ့။ ညီမလေးကို နှစ်သိမ့်ပေးဖို့ ကိုယ်ကလွဲပြီး ဘယ်သူမှမှ မရှိတာ။ ကျနော် အိပ်ယာက ပြန်ထ။ ပြီးတော့ အတွင်းခန်းလေးထဲဝင်လိုက်တော့ ဇာခြင်ထောင် ပါးပါးလေးထဲမှာ ခန္ဓာကိုယ်လေး ဟိုဘက်စောင်းပြီး လှဲလျောင်းနေတဲ့ ညီမလေးရဲ့ အလှဟာ တကယ် မိန်းမ ပီသလှတယ်။
ငိုရှိုက်သံ သဲ့သဲ့လေးကတော့ တေးဂီတ တပုဒ်လို နားဝင်ချိုလွန်း လှတယ်။ ကျနော် ဇာခြင်ထောင်လေးကို အသာလှန်ဝင်ပြီး ညီမလေးရဲ့ လက်မောင်းလေးကို ဖွဖွလေး ကိုင်လှုပ်လိုက်တယ်။
“ညီမလေး. . . ဝေဝေ ငိုနေတုန်းလားး . . တိတ်ပါတော့ဟာ. . . ကိုကြီးတို့ ကိစ္စကို ဘယ်သူမှမှ မသိတာ. . ညီမလေး ရှက်စရာလည်း မလိုဘူး ကိုကြီး ညီမလေးကို ဘယ်တော့မှ ပစ်မသွားပါဘူဟာ . . . ငိုနဲ့တော့ . . .တိတ်တော့ နော်. . ”
ကျနော်ကချော့တော့ ဝေဝေ့ ငိုသံလေးတွေ တိုးတိုးသွားတယ်။ ဒီလိုကြတော့လည်း ညီမလေးက အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပြန်ရော။
တဏှာဆိုတာဖြစ်ဖို့ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ အခုလည်း တဖက်ကို လှည့်အိပ်နေတဲ့ ဝေဝေရဲ့ နောက်ပိုင်း အလှလေးဟာ ကျနော့် တဏှာမီးကို ထ တောက်စေပြန်ပြီ။ ထမီခပ်ပါးပါးလေးကို အတွင်းခံ မပါပဲ တင်းတင်းလေး ဝတ်ထားပြီး အပေါ်ပိုင်းက တီရှပ်အင်္ကျီ အဖြူရောင်လေး ဝတ်ထားတယ်။ ခါးသိမ်သိမ်လေးနဲ့ တင်ပါး ကားကားလေးကို မြင်တော့ ကျနော် တံတွေးကို အကြိမ်ကြိမ် မျိုချမိတယ်။
ညဦးပိုင်းကတင် လုပ်ထားတဲ့ လီးက အခုပုဆိုးအောက်မှာ ဆက်ခနဲ ပြန်ထောင်လာတယ်။ ကျနော် ခွေးဇာတ်ခင်းချင်ပြန်ပါပြီ။ ဒါနဲ့ပဲ ညီမလေးရဲ့ တင်ပါးလေးကို ပွတ်ပေးမိတော့တာပဲ။ ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ညီမလေးက ခေါင်းလေးစောင်းပြီး ကျနော့်ကို လှည့်ကြည့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ဘယ်ခြေလှမ်း လှမ်းနေပြီဆိုတာသိတော့ သက်ပြင်းလေးချပြီး တဖက်ကို ခေါင်းပြန်လှည့်သွားတယ်။ ကျနော် ဘာလုပ်လုပ် သည်းခံ လိုက်လျောပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။
ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း နောက်ကနေ ဝေဝေ့ ထမိန်လေးကို ခါးအထိရောက်အောင် ဆွဲလှန်တင်လိုက်တယ်။ အားပါးပါး။ လှလိုက်တဲ့ တင်ပါးလေးပါလား။ ညီမလေးရဲ့ တင်ပါးအိအိလေးတွေကို အနမ်းတွေ ပေးလိုက်တယ်။ ပြီတော့ သူ့ဖင်လေးကို ဖြဲဟလိုက်တော့ အဖုတ်လေးက စူထွက်လာတယ်။
ကျနော့် လျှာကြမ်းကြမ်းကြီးနဲ့ သူ့အဖုတ်လေးကို အားရပါးရ လျက်လိုက်တော့ သူ့ကိုယ်လုံးလေး တဆက်ဆက် တုန်နေတယ်။ အဖုတ်က ထွက်လာတဲ့ စောက်ရည် ကြည်ကြည်လေးတွေကို လျှာနဲ့သိမ်းကြုံး မျိုချပစ်လိုက်တယ်။ ကောင်းမှကောင်း။ ဝေဝေ ညည်းသံ သဲ့သဲ့က သာယာလွန်းတယ်။
ခုဆို ကျနော်ကတော့ ပုဆိုးကိုချွတ် လီးကို တံတွေးစွတ်ပြီး ညီမလေးကို နောက်ပိုင်းကနေ လိုးဖို့ နေရာယူလိုက်ပါပြီ။ သူ့ထမိန်ကိုလည်း ချွတ်ပြီး သူ့အင်္ကျီကို လည်ပငထိ လှန်တင်လိုက်တယ်။ သူ့ နို့ဖြူဖြူလေးတွေကို လက်နဲ့လှမ်းကိုင် ပွတ်သတ်နေလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ လီးကို အဖုတ်ဝ တေ့ပြီး တဖြည်းဖြည်း ထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်။
“အားးးး ရှီးးးးးး ကောင်းလိုက်တဲ့ စောက်ပတ်လေးးး အားးးးးးး”
ညီမလေးကတော့ အံကိုကြိတ်ပြီး အသက် ခပ်ပြင်းပြင်းရှူနေလေရဲ့။ ၁၇ နှစ် အရွယ် ကောင်မလေးကို ကျနော့်လို လူကြမ်းကြီးက လိုးနေရတာလေ။ လီးကို သားအိမ်အဝထိ ထိုးသွင်းလိုက် ဖြည်းဖြည်းလေး ဆွဲထုတ်လိုက်နဲ့ ဇိမ်နဲ့လိုးနေရတာ ကောင်းလိုက်တဲ့ အရသာပဲ။
ကျနော့် နှုတ်ခမ်းတွေကလည်း ညီမလေးရဲ့ လည်တိုင်ကျော့ကျော့လေးကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့နမ်း။ လက်ကလည်း နို့သေးသေးလေးတွေကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ပွတ်ချေ။ လီးတံကြီးကလည်းးစည်းချက်ညီညီ ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်နဲ့ လောကကြီးကိုတောင် မေ့သွားမတတ် ဇိမ်ရှိလှတယ်။ မောင်နှမ နှစ်ယောက်ရဲ့ ညည်းသံလေးတွေက ဟော့ဒီ ခြံဝင်းလေးထဲမှာ လွင့်ပါးနေလေတယ်။
သန်းခေါင်ကျော်အချိန်ဆိုပေမယ့် ကျနော်တို့ကတော့ မအိပ်အားသေးပါဘူး။ ကာမ အရသာကို အပြည့်အဝ ခံစားလို့ ကောင်းနေတုန်း။ ညီမလေး ပိပိက အရည်ပစ်ချွဲချွဲတွေ ထွက်လာလေလေ ကျနော့်လီး အထုတ်အသွင်းဟာလည်း ပိုချောမော မြန်ဆန်လာလေလေပါပဲ။
“အားးး ကောင်းလိုက်တာ ညီမလေးရယ်. . .”
“ဟုတ် ကောင်းတယ် ကိုကြီးးး အင်းးး ဟင်းးး”
ညီမလေးဆီက စကားသံလေးကြားရတော့ ကျနော် ပိုကြည်နူးမိသွားတယ်။ ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း ရဲရဲတင်းတင်း ဖြစ်သွားပြီးးး
“ညီမလေး ဖင်ကိုလိုးချင်တယ်… ညီမလေးရဲ့ စအိုထဲ အစ်ကို့လီးကို ထည့်ပါရစေ”
ကျနော်လည်း သူ့စောက်ပတ်ထဲက လီးကို ပြန်ချွတ်လိုက်ပြီး တံတွေးများများစွတ် ညီမလေးရဲ့ ဖင်စအိုဝလေးမှာတေ့ပြီး ဆောင့်ချလိုက်တယ်။ လီးတဝက်လောက် သူ့စအိုထဲ မြုပ်ဝင်သွားတယ်။
“အားးး နာတယ် သေပါပြီရှင့် အီးး ဟီးးး”
ညီမလေးက ထအော်ပေမယ့် သူ့စအိုထဲကို လီးတဆုံး ဝင်ဖို့သာ ကျနော့်အတွက် အခုချိန်မှာ အဓိက။ လှဲနေတဲ့ ညီမလေးကို ဆွဲမလိုက်ပြီး ကုန်းခိုင်းလိုက်တယ်။ နာပေမယ့် ညီမလေးက ခံစစ်ကောင်းတယ်။ မျက်ရည်စတွေတော့ ထွက်နေတယ်။
ခုဆို တဝက်လောက် ဝင်နေတဲ့ လီးတံကြီးဟာ စအိုက ထွက်ကျလာတဲ့ သွေးတွေ အလိမ်းလိမ်း ပေကျံလို့။ ညီမလေး ဖင်စအို ကွဲထွက်သွားတာထင်ပါ့။ မတတ်နိုင်ဘူးးလေ အစဆိုတော့ သွေးထွက်မှာပေါ့။ ဒါနဲ့ ကျနော်လည်းး ညီမလေးရဲ့ တင်ပါးလေးကို ကိုင်ပြီး လီးကို အဆုံးထိ မရမက ထိုးသွင်းလိုက်ပါတော့တယ်။
“ပြွတ် ပြွတ် ဒုတ် . .”
“အားးး သေပြီ သေပြီ ကိုကြီးရယ် နာတယ် ဟီးး”
“နာလည်းး ကြိတ်ခံတော့ဟာ… ငါ ရပ်လို့မရတော့ဘူး… အင့်. . . .ကွာ . . အင့် အင့် . .”
“ငါ့ မယားလေးကို လိုးလို့ ကောင်းလိုက်တာ အားးး ရှီးးးးးးး ဟင်းးး”
ကျနော်က အသားကုန် ဆောင့်လိုးလေလေ ဖင်စအိုထဲက သွေးတွေ ထွက်ကျလာလေလေ။ လုံးချင်းအိမ်လေးဟာလည်း တအိအိ လှုပ်ယမ်းလေလေပေါ့။ ညီမလေးကတော့ မျက်လုံးကို စုံမှိတ် အံကိုကြိတ်ပြီး ဖျာပေါ်ကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ထောက်ထားလေတယ်။ အချက်သုံးဆယ်လောက် သူ့စအိုလေးကို လိုးပြီးတော့ ကျနော့်လီးကို ညီမလေးရဲ့ စအိုအိမ်ထဲကနေ တဖြည်းဖြည်း ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ သွေးစွန်းနေတဲ့ လီးကြီးဟာ တဆက်ဆက် တုန်ခါနေတယ်။
ညီမလေးကတော့ အလိုက်တသင့် အပေးကောင်းလှပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျနော်က ဒူးထောက် အနေအထားနဲ့ ဝေဝေ့ကို ဆွဲထူပြီး သူ့ခေါင်းလေးကို လီးအနားကပ်ပြီးတော့ သေချာကိုင် သူ့ပါးစပ်ပေါက်လေးထဲ လီးကို ထိုးသွင်းပြီး အချက်နှစ်ဆယ်လောက် လိုးလိုက်တယ်။
“ညည်း ပါးစပ်လေးက လိုးလို့ ကောင်းလွန်းတယ်ဟာ”
“အင်းးးးး အားးးး အင့် အင့်”
ကျနော်လည်း မနေနိုင်တော့တဲ့အဆုံး လီးကို သူ့အာခေါင်ထဲအထိ ထိုးသွင်းပြီ ညီမလေးရဲ့ ပါးစပ်ထဲ မှာတင် သုတ်ရည်တွေ ပန်းထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီညက နှစ်ယောက်လုံး ပြိုင်းသွားပြီး အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။
မနက်ရောက်တော့ ညီမလေးက ဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလိုနဲ့ ကျနော့်ကို စိတ်မဆိုးပါဘူးတဲ့။ ပါကင်ဖောက် စအိုကွဲထားတဲ့ ဒဏ်ကြောင့်လားမသိ လမ်းလျှောက်ရင်တော့ ကွတတ ဖြစ်နေတာ သုံးရက်လောက်ကြာမှ ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။
ကျနော်နဲ့ ညီမလေးရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ အရင်ကထက် ပိုပွင့်လင်းလာပြီး တစ်ဆင့်ထက်တစ်ဆင့် လင်မယားသဘောမျိုး ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။ အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ အိပ်တဲ့ ကျနော်ဟာလည်း ခုဆို ညီမလေး ခြင်ထောင်ထဲ ညတိုင်း ဝင်အိပ်နေပါပြီ။ ညတိုင်းလည်း ညီမလေးဝေဝေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ လိုး နေတတ်ပါပြီ။ သူကိုယ်ဝန် ရှိသွားမှာစိုးလို့ တားဆေးတွေကိုလည်း ပုံမှန် ဝယ်တိုက်နေရပါပြီ။ ကိုယ့်ညီမ အရင်းခေါက်ခေါက်လေးကို စိတ်ကြိုက် လိုးခွင့်ရနေတာဟာ ကျနော့်ဘဝရဲ့ အကောင်းဆု ဆုလာဘ်ပါပဲ။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 18,567
တူမ အကိတ်ကြီး →